Pejy fandokoana jiosy: fantaro miaraka am-pilalaovana ireo sary ara-pivavahana
Rehefa mandehandeha dia tsy mahita olona samy hafa fahaizana amin'ny fiteny fotsiny ianao, fa olona avy amin'ny tontolo ara-pivavahana hafa koa. Ny fivavahana misy mpino betsaka indrindra eto an-tany - ireo antsoina hoe fivavahana maneran-tany - dia ny bodista, kristiana, hindoisme, silamo ary jodaisma. Izahay dia manandrana mampiditra ireo singa tena ilaina indrindra amin'ireo fivavahana voalaza ao amin'ny pejin'ny fandokoana fivavahana.
Pejy fandokoana jiosy
Miaraka amin'ny mpanaraka 14 tapitrisa eo ho eo, ny fivavahan'ny jiosy dia vitsy kokoa ny mpanaraka azy noho ny fivavahana eran-tany, fa mbola iray amin'ny fivavahana manan-kery indrindra eto an-tany. Amin'ny maha-fivavahana tokana ny fivavahana jiosy dia mifantoka amin'ny "Andriamanitry ny Isiraely" ny fivavahana jiosy ary mifototra amin'ny fampianarana an-tsoratra (Torah) sy ny fomban-drazana am-bava (ao anatin'izany ny Talmud).
Fivoahana avy tany Egypta
Menorah / labozia fito mitam-piadiana
Torah, Menorah & Star an'i David
Samy nipoitra avy amin'ny fampianarana Torah ny Kristianisma sy ny Silamo ary avy eo dia nipoitra tao amin'ny fivavahan'ny Jiosy. Ny mariky ny Fivavahana Jiosy dia ny Kintan'i David, izay misy dikany ara-politika ihany koa ary mandravaka ny sainam-pirenen'i Isiraely. Ny nanorina ny fivavahana dia i Moises, izay nanangana ny fivavahana jiosy tamin'ny taona 1200 talohan'i JK. Rehefa nahazo ny Torah avy amin'Andriamanitra tany an-tendrombohitra Sinay izy, araka ny fampianarana.
Faly izahay mandray ny soso-kevitrao momba ny tandindona ara-pivavahana hafa.
Sinagoga pejy fandoko | Fivavahana jiosy
Mandoko ny fivavahana - Jodaisma
Silamo - boky fandokoana fivavahana
Buddhism - boky fandokoana fivavahana
Pejy fandokoana kristiana | fivavahana
Pejy fandokoana fivavahana